Ninjaland 2016 ခုနှစ်တွင် Billund & ကာလီဖိုးနီးယားမှလာမယ့်
18 / 09 / 2015 ကြွယ်ဝသော 1056 Views စာ0မှတ်ချက် 2016, Lego, ဥပဒေ Billund, LEGOLAND ကာလီဖိုးနီးယား, Ninjago, စာနယ်ဇင်းများ
အသစ် Lego® Ninjago™ - Ninjaland သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် LEGOLAND Billund နှင့် California သို့နှစ်နိုင်ငံစလုံးသို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေစခန်းနှစ်ခုလုံးသည်ကြာသပတေးနေ့တွင်အသစ်တစ်ခုအတွက်အစီအစဉ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ Ninjago3D မြင်ကွင်းတွင်မီးနှင့်ရေခဲဘောလုံးများကိုပစ်ချရန်လက်ဟန်အမူအရာများပေါ်တွင်သာမှီခိုနေရသောလူငယ်များသည်ရုန်းကန်သူရဲများအဖြစ်ရုန်းကန်သူများအဖြစ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါစီးနင်း p ဖြစ်ပါတယ်art ၏ကြီးထွားလာလူကြိုက်များအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်လိမ့်မယ်အသစ်စက်စက် Ninjagoland ၏ Lego မှ'' s ကို Ninjago ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကစားစရာများနှင့်တီဗီစီးရီးများက C ကိုထုတ်လွှင့်သည်artoon ကွန်ယက်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာစီးနင်းမှုသည် LEGOLAND ၏မည်သည့်ဆောင်ပုဒ်ဥယျာဉ်ကိုမဆိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ပထမဆုံးသောဖြစ်သည့်“ ရှေ့တန်းမှ” နည်းပညာကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ စီစဉ်ထားသောnewရိယာသစ်များကိုနွေ ဦး ရာသီတွင်ပွဲ ဦး ထွက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Theme park အတိုင်ပင်ခံဒန်းနစ်စပီဂယ်လ်ကကား၏ထူးခြားသောနည်းပညာသည်အနာဂတ်ဆွဲဆောင်မှုများအတွက်ဂိမ်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။ "ဒီလက်ပေါ် participatory အတွေ့အကြုံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းအတွက်အနာဂတ်လှိုင်းလုံးဖြစ်သည်။ ဒီဟာကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့သောဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုမြင်ရန်သင်မျှော်လင့်လိမ့်မည် Disney ပထမ ဦး ဆုံးပန်းခြံမှာရပ်ပါ” ဟုစင်စင်နာတီအခြေစိုက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Theme Park ၀ န်ဆောင်မှုဥက္ကဌ Speigel ကပြောကြားသည်။ "ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းဒီကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်, ငါသည်ဤဆွဲဆောင်မှုအများပြည်သူလက်ခံရရှိပုံကိုကြည့်ရှုရန်, ငါသည်သင်တို့ကိုအာမခံနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ လိုင်းများရှည်လျားလျှင်၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းရှုထောင့်မှအချက်ပြမှုကိုသေချာပေါက်ပေးလိမ့်မည်။ ”
တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက် "ဒီနှစ်၏ Coolest Ninja ကိုသတင်း! Lego® Ninjago™ - Ninjaland
အသစ် Lego® Ninjago™ - Ninjaland သည်သင်၏နင်ဂျာစွမ်းရည်ကိုစိန်ခေါ်လိမ့်မည်။ သငျသညျလွိုက်ရဲ့ Laser Maze ဖြည့်စွက်ရန်လုံလောက်သောသွက်လက်ပါသလား မင်းမှာ Cole's Climbing Wall နဲ့ Kai ရဲ့ Spinners အတွက်ချိန်ခွင်လျှာရှိသလား။ Jay's Reaction Game အတွက်သင်အလုံအလောက်ရှိပါသလား။ ယခုနှစ်အတွင်းတွင်အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုအတွက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ Lego® Ninjago™ - စီးနင်းမှု? “
LEGOLAND®နှင့် ninjas များသည်သင်၏အကူအညီလိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်အဆုံးစွန်အဘို့အဆင်သင့်ပါ Lego® Ninjagoအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောကမ္ဘာ့အသွင်အပြင်ဆွဲဆောင်မှုရှိအတွေ့အကြုံ™ Lego® Ninjago™ - စီးနင်းမှု။ ၎င်းသည်သင့်အားမှန်ကန်စွာဆွဲဆောင်လိမ့်မည် Lego® Ninjagouniverse စကြာ ၀ ,ာတွင်အချက် (၄) ချက်ကိုသင်ကြားရမည် - မီး၊ လျှပ်စစ်၊artဇနှင့်ရေခဲ။ မင်းရဲ့အကူအညီမပါဘဲ ninjas တွေဟာမဟာ Devourer ကိုအနိုင်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ မာစတာဝူပြောသောစကားများအရ -“ ငါတို့အတူတူကပိုအားကောင်းလာတယ်။ ”
"2016 ခုနှစ်မှာ Awesome ကိုစောင့်ဆိုင်း။ "
မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် Ninja လေ့ကျင့်ရေးစခန်း
အသစ်ကခုနှစ်မှာ Lego Ninjago™ - Ninjaland သည်သင်၏ Ninja ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိကျမှန်ကန်မှု၊ Lego® Ninjago™ - Ninjaland သည်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်မိုးလုံလေလုံအပြင်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများ၎င်းတို့၏ dep ကိုယူပါartတက်ကြွကစား, အသင်းအဖွဲ့နှင့်အပြန်အလှန်အတွက် ure ။
Lloyd's Laser Maze ကိုစမ်းကြည့်ဖို့ပြင်ဆင်ပါ။ လေဆာရောင်ခြည် ၃၀ ကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ဖြတ်သန်းနိုင်ရန်သင်၏ Ninja စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုရမည်။ ဂိုးသွင်းစနစ်သည်တစ်နေ့တာ၏မှတ်တမ်းများကိုခြေရာခံသည်။ ထို့ကြောင့်မိသားစုနှင့်သင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည် friends.
Jay's Reaction Game တွင်သင်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်တောက်ပသောခလုတ်များကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏လှုပ်ရှားမှုနှုန်းကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
Cole ၏ ၁၂ မီတာရှည်သောတောင်တက်ခြင်းတွင်သင်၏အစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုလေ့ကျင့်နိုင်သည်။ ရောင်စုံတောင်တက်သောလမ်းများကလမ်းတစ်လျှောက်လင်းစေပြီးမှန်ကန်သောဆုပ်ကိုင်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးလမ်းကြောင်းအချို့ကိုလိုက်လျှောက်ရန်ကူညီပေးသည်။
Lego Ninjago™ - စီးနင်းမှု
In Lego® Ninjago™ - The Ride သည်ကျော်ကြားသောသူရဲကောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံမည် Lego Ninjago™စကြဝuniverseာ။ အတူတကွသင်က element တွေကိုမီးကျွမ်းကျင်ဖို့သင်ယူရပါမည်, eartမဟာ Devourer ကိုတိုက်ဖျက်ရန်ဇ၊ လျှပ်စီးနှင့်ရေခဲ။
သငျသညျကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြတ်သန်းနေစဉ်သင့်ရဲ့ Ninja ကိုလှုံ့ဆော်မှုကိုလေထုကတဆင့်ပျံသန်းသည် Ninjago အာရုံအားလုံးစိန်ခေါ် 4D ဝuniverseာ။ အသစ်စက်စက်နည်းပညာသည်သင်၏လှုပ်ရှားမှုကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ Ninja Force သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဒီတော့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနှစ်မြှုပ်ရန်ပြင်ဆင်ပါ Lego Ninjago™စကြဝuniverseာ။
Lego Ninjago™ - စီးနင်းမှုသည်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ ၁၁၀ စင်တီမီတာအောက်ကလေးငယ်များသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်လိုက်ပါရမည်ဖြစ်သည်
၂၀၁၆ သည် LEGOLAND Billund Resort ၏သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှစ်ဖြစ်သည်။
မြေသစ်၏5100ရိယာမှာ ၅၁၀၀ m2 ဖြစ်သည်။
1.5 တန်ချိန် Lego တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရန်အုတ်ကိုအသုံးပြုကြသည်။
ဆောက်လုပ်ရန်နာရီ ၇၀၀၀ ခန့်ကြာသည် Lego မော်ဒယ်များ။
LEGOLAND သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် 34,500D မျက်မှန် ၃၄,၅၀၀ ကိုအသုံးပြုရန်မျှော်လင့်ထားသည်။
အဆိုပါစီးနင်း 1000 လက်မဖန်သားပြင်ပါရှိသည်။
← HUKD မှနောက်ဆုံး LEGO အပေးအယူ - ၄/၁၂
ဒီစနေနေ့ဟာနိုင်ငံသားအုတ်မြစ်ဒုတိယနေ့ - Electric Boogaloo! →
တည်ထောင်သူ Brick Fanatics။ ကျွန်တော်ဟာ Sheffield အခြေစိုက်အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် Richard Hayes ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ထူးခြားသောဆံပင်ပုံစံကြောင့် Mohican Runner အဖြစ်လူသိများသည်။ ငါ 34th ကနေအပြေးသမားတစ် ဦး သို့သွားပြီ, အပြေးစိန်ခေါ်မှုများအမျိုးမျိုးလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပရဟိတလုပ်ငန်းအတွက်£ 20 သန်းကျော်စုဆောင်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် Absolute1.3, SockMine နှင့် Tribesports မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်။ လောလောဆယ်ငါမာရသွန်အဘို့အ 360:17 20k PB, 5:36 02k PB, 10:81 HM PB & 11:3:08 ရှိသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဘလော့ဂ် http://mohicanrunner.co.uk တွင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်
ဆက်သွယ်ပါ Brick Fanatics at အဆက်မပြတ်[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]